संसारको सबैभन्दा महंगो चिजको कुरा गर्दा सायद हीरा, प्लाटिनम आदि भन्नुहोला । तर यो दुनियाँमा हीरा तथा प्लाटिनमभन्दा कैयन गुणा धेरै महंगो एउटा वस्तु छ, जुन यति दुर्लभ हुन्छ कि एक ग्रामकै मूल्य सयौँ खर्ब रुपैयाँ पर्दछ । अर्थात् संसारको सबैभन्दा महंगो…
२५ जेठ। मोबाइल बिना जीवन असम्भब सोच्छौं हामी । हुनपनि मोवाइलले दैनिक जीवनका धेरै काम सजिलो बनाइदिएको छ । तर खतरा पनि उत्तिकै उत्पन्न गरेको छ । हालै भारतको मुम्बईमा रहेको एक रेस्टुराँमा एक व्यक्तिको शर्टको खल्तीमा रहेको मोबाइल…
संसारकै अग्ली मोडेल
३ जेठ । रुसकी एकाटेरिना लिजिना संसारकै अग्ली मोडेल बनेकी छन् । गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डसले हालसालै मात्र उक्त मान्यता दिएको हो । लिजिनाको उचाई ६ फिट ८.७७ इन्च रहेको छ । उनको देब्रे खुट्टा ५२.२ र दाहिने खुट्टा ५२ इन्च छ ।…
सबैभन्दा ठूलो साइकल
३ जेठ । सामान्यतया साइकल कस्तो हुन्छ? सबैले देखेकै हो । हलुका । सानो बाटोमा पनि चल्ने । बोकेर लैजान पनि सजिलो । तर गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डसमा अचम्मको साइकल सूचीकृत भएको छ । बेल्जियमका इन्जिनियर जेफ पिटर्सले अचम्मको साइकल निर्माण गरेका…
जसले श्रीमानको लिंग काटेर ट्वाइलेटमा बगाइन्
आफ्नो श्रीमान वा श्रीमतीले अरु नै व्यक्तिसंग यौन सम्बन्ध राखेको कसलाई मन पर्ला ? हालै एकजना महिलाले यस्तै रिसको झोंकमा आफ्नो लोग्नेको यौनांग छिनालेर ट्वाइलेटमा बगाइदिएकी छन् । भारतको जालन्धरस्थित जोगिन्दर सहरमा बस्ने आजाद सिंह नामक पुरुष यस्ता अभागी सावित भए, जसको लिंग…
जुन टापुमा पुरुषलाई जान बन्देज छ
तपाइँले गर्ल्स पार्टी, गर्ल्स स्कुल, गर्ल्स होस्टेल, लेडिज नाइट आदिको बारेमा सुन्नु तथा जान्नु भएको होला । अब यी ठाउँहरुलाई माथ दिदैछ एउटा टापुले । जुन टापुमा केवल महिलाहरुलाई मात्र प्रवेश छ । फिनल्याण्डको बाल्टिक समुद्र नजिक सुपर सी नामको टापु छ ।…
१२ वर्षीय बालक, जसले बाघलाई फुडबल खेल्न सिकाए
भारतको औरंगाबादमा बस्ने १२ वर्षीय पृथ्वीराज पाटिल सिद्धार्थ गार्डन एन्ड जूमा परिवारसहित घुम्न गएका थिए ।। त्यहँका बाघहरू बसिरहेको देखे र उनले बाघहरूलाई धेरै बेर हेरिरहे । बाघहरू खाना मात्र खान्थे अनि अलिकति डुलेर फेरि आएर बस्थे । पृथ्वीराजले जूका सबै बाघ सुस्त…
९ पुष । संसारमा एउटा यस्तो पनि पुल छ, जसले कुकुरलाई आत्महत्या गर्न उक्साउँछ । पुलले पहिला कुकुरहरूलाई आफूतिर खिँच्छ अनि उनीहरू त्यहाँ पुगेपछि ५० फीटमाथिबाट हाम्फाल्छन् । भाग्यवश कुकुर बाँच्यो भने पनि फेरि पुलमा चढ्छ र हाम्फाल्छ । स्कटल्यान्डको डम्बार्टननजिक मिल्टन गाउँको…
इण्डियन आर्मीका ५८ जवानहरु एउटै मोटरसाइकलमा एकैपटकमा चढेर विश्व कृतिमान कायम गरेका छन् । बैैैैंगलोरको यलाहांकामा रहेको भारतीय वायुसेनाको क्याम्पमा यस्तो कीर्तिमानी कार्य गरिएको हो । ५ सय सीसीको रोयल इनफिल्ड मोटरसाइकलमा ५८ जना सैनिकहरु एकैपटकमा चढेर १२ सय मिटर टाढासम्म मोटरसाइकल गुडाएका…